Carbon Fibhi Mota Kuputira vinyl chinamirwa 2D 3D 4D 5D 6D
Yakakosha mota-mativi matatu kabhoni fiber firimu, yakagadzirwa nemhando yepamusoro PVC fiber, haina kumbopera, chigadzirwa ichi chinofema chinamirwa, chidzivirira bubble. Zvinhu zvakasarudzwa zviri nyore mumhando, zvakanaka mukuomarara, zvine simba mukutsungirira uye zviri nyore kuvaka. inosarudza zvakatipoteredza ...
Dhinda musoro kugadzirisa
Dhinda misoro ingangodaro ichivharira iwo mahedhiyo nekuda kwekukanganisa nguva yekudhinda, kushandiswa zvisina kunaka kweinki, kana kusashandisa kwenguva yakareba kunoita kuti muromo uvhare. Isu tinofanirwa kunge takurumidza kubata, zvichikonzera kurasikirwa hakufanirwe kunge kuri. Zvekudhinda zvakajairika, asi kushomeka kwemavara, kana pasi pemhando yepamusoro r ...
ne admin pane 20-12-13
Ndeupi musiyano uripo pakati pemakambani ekugadzira mhando uye vamiririri vekushambadzira
Chii chinonzi UV Kudhinda